पढ्नुस संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको पुरै मन्तव्य ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
पढ्नुस संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको पुरै मन्तव्य !
सरकार सञ्चालन सहकार्यको संस्कृति अनुरूप होस् र सत्तारुढ दलहरूबीच निरन्तर समझदारी कायम होस् भनेर हामीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेका थियौं । कुनै असमझदारी भए त्यहाँ छलफल गर्ने, समस्या भए त्यहीँबाट समाधान खोज्ने, अन्य दलहरूको पनि सहयोग लिने र अन्तिम निर्णय गर्ने थलो त्यसैलाई बनाइने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ । तर यत्ति ठूलो निर्णय लिँदा उक्त समितिको एकपटक पनि बैठक नबस्नु र प्रधानमन्त्रीलाई न्यूनतम जानकारी पनि नदिई हिजोसम्म आफै सम्मिलित सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक रूपमा कति सङ्गतिपूर्ण छ र यसले नेपाली राजनीतिलाई कति प्रदूषित गर्छ, मैले भनिरहनु पर्दैन । म अस्ति एकजना माननीयले सदनमा उठाउनुभएको प्रश्न दोहो¥याउन चाहन्छु– ‘सरकार सञ्चालन गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने माननीयज्यू एउटै हो ?
ड्ड तराई–मधेसको आन्दोलन साम्य भएको छ । केही दल या नेताहरूका असन्तुष्टि छ । तर त्यो असन्तुष्टि तराईवासी मधेसीहरुको वृहत्तर हितका निम्ति हुन् कि कुनै दल विशेषलाई सरकारमा पु¥याउन र कसैलाई रोक्नका लागि?समयले बताउने नै छ ।
ड्ड समस्या समाधानका लागि संविधानका दुईवटा धारामा संशोधन गरिएको छ ।
ड्ड अघोषित नाकाबन्दी गएको माघ महिनामै अन्त्य गरिएको छ ।
ड्ड करिब २ लाख ६५ हजार भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भएको छ ।
ड्ड नेपालको शिरलाई माथि उठाउँदै सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभीमानको वास्तविक अभ्यास सुरु भएको छ ।सार्वभौमिक समानतामाथि आधारित नेपालको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाइएको छ ।
ड्ड सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, सत्ताको खेल र पहिचानको राजनीतिका नाममा ओझेलमा परेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासका सपनाले नयाँ आकार लिन थालेका छन् ।
ड्ड नेपाली जनतामा, राजनीतिप्रति निरपेक्षभाव राख्ने युवा र नयाँ पुस्तामा हाम्रो नेपाल अझै राम्रो नेपाल संभव छ र यो काम हामी आफै गर्न सक्छौं भन्ने नयाँ विश्वास र भरोसा जागृत भएको छ ।
ड्ड संविधान कार्यान्वयनको ठोस मार्गचित्र अगाडि सारेर काम अगाडि बढेका छन् ।
ड्ड जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि अगाडि सारिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई के गर्नु हुन्छ?